लेखक संगठनलाई पार्टीको भ्रातृ संगठन बनाएपछि स्वतन्त्रताको औकात कति रहन्छ ? | रुपान्तरण
लेखक संगठनलाई पार्टीको भ्रातृ संगठन बनाएपछि स्वतन्त्रताको औकात कति रहन्छ ?
२८ असार २०७६, शनिबार १४:१५
संवाद : तीर्थ श्रेष्ठ
प्रस्तुति : किशोर नेपाल
हिजोआज तपाईंको अधिकांश समय विन्ध्यवासिनीमन्दिर परिसरमा वित्नथालेको छ । यसले तपाईको जीवनमा कस्तो परिवर्तन आउन लागेको संकेत गर्छ ?
यसको कुनै विशिष्ट कारण छैन । बाल्यकालमा मन्दिर परिसरमा बसेर पढियो । मैले अक्षरसँग परिचित हुने अवसर यहीँ पाएको हो । यो मेरा लागि यस्तो धाम हो जहाँ मैले अक्षर चिनें र फुटवल खेल्न सिकें । साथीहरु बनाएँ । अनेक उल्का र उपद्रव गर्ने, बदमासी गर्ने काम यहीं भए । पछि, राजनीतिमा अभ्यस्त हुँदै गर्दा पनि यो मन्दिर परिसरको उपयोग गरिएको छ । हाम्रो सांस्कृतिक संस्था पनि यहीं थियो । २०४०–४२ सालदेखि कार्यालय स्थापना गरेर राखिएको । पोखरामा संगीत सम्बन्धी प्रशिक्षण दिने संस्था पनिखोल्यौं । त्यसको कार्यालय पनि यही मन्दिर परिसरमा राख्यौं । पुण्य कमाउने ललक र लालसा होइन मेरो । म अत्यन्त आध्यात्मिक भएर मन्दिर उक्लिएको पनि हैन । विन्ध्यवासिनीको मन्दिर र यसको परिसरलाई कसरी सुन्दर बनाउने भन्ने भावना मात्रै हो मेरो ।
तर, तपाईंलाई राम्ररी चिन्ने मानिसहरुले राजनीति सँग तपाईंको विरक्तिलाई पनि मन्दिर सेवा संग जोडेर हेर्ने गरेका छन । राजनीतिक रुपले एक समय पोखराको एकदमै सक्रिय मान्छे हो तीर्थ ।
यसको कारण राजनीति प्रतिको बित्रिष्णा त हुँदै हो । राजनीतिमा जुन किसिमको जोडजाम र चाकरी चल्न थाल्यो, हाम्रा लागि त्यो सहज अवस्था भएन ।हामी आत्मसम्मान र स्वाभिमानका लागि राजनीतिमा लागेका मानिस हौं । त्यसको बिपरित अबस्थामा राजनीतिमा टिक्न कै लागि मात्र त्यस्तो तिकडम गर्ने त कुरै थिएन । हामीले राजनीति आदर्शबाट शुरु गरेका थियौं, सारै प्रष्ट तरिकाले । अहिले त राजनीतिको उद्देश्यहरु नै परिवर्तित हुन थाल्यो । ब्यापारीहरु, जग्गा-दलालहरु र बिभिन्न स्वार्थका संरक्षकहरु राजनीतिमा हावी हुन थाले । राजनीतिको आदर्श नै समाप्त भएको ठाउँमा हामी बसिरहनुकोऔचित्य रहेन ।
राजनीतिमा लागेर सामाजिक विकास निर्माणका काममा लाग्न सकिन्छ कि भन्ने सोच त थियो पहिले देखिनै । आफ्नो ठाउँलाई सुन्दर बनाउने, विकास सम्पन्न बनाउने जुन इच्छा थियो त्यो इच्छा राजनीतिमा लागेर पुरा हुने छाँट देखिएन । काम गर्ने मान्छेलाई ठाउँ पनि चाहिंदो रहेछ । म पोखरा नगरपालिकाको मेयर भएर त्यो काम गर्न पाउने अवसर त छैन । वडा-अध्यक्ष हुने मेरो रुचि हैन । भनेपछि, मेरो विकास गर्ने चाहना, सानै रुपमा भएपनि,यही मन्दिर परिसरमा साकार गर्ने प्रयत्नमा लागेको छु । मनमा पक्कै लागेको छ – केही गरेर देखाउन सकिन्छ ।
साहित्यमा यस्तो किसिमको विकल्प खोज्न सकिदैन थियो ?
मैले आख्यान लेख्ने प्रयत्न गरेको हो । आख्यान मेरो स्वभाव संग मिल्ने जस्तो मलाइ लागेन । कविता पनि कुन-कुन विषयमालेख्ने ! कति लेख्ने ? साहित्य पनि, अहिले विश्लेषण गर्ने हो भने, राजनीतिभन्दा राम्रो अवस्थामा छैन । गुटबन्दी बढी छ । एउटा टिम बनाउने, एकले अर्कोलाई उचाल्ने र थचार्ने । यो नकारात्मक प्रवृत्ति साहित्यमा देखा परेको छ । त्यसो त, यी सबैबाट अलग्गै बसेर लेख्न नसकिने होइन।कविता ज्यादैं फुर्सदमा लेख्ने विषय पनि होइन । योजना बनाएर लेख्नुपर्ने र हतारमा लेख्नुपर्ने विषय त हुँदै होइन ।
त्यसो भए कविता फुत्त दिमागमा आएको बेलाटिपी हाल्ने…
कति कविता त दिमागमा आयो र लेखियो पनिहोला । तर एउटा सानो कविता लेख्न तीन महिना लाग्यो । मेरा दुई तीन वटा कविता त्यस्ता भए । ती कविता राम्रैमा गनिएपनि । जस्तो, लाहुरे फूलको कविता लेख्दा मलाई झण्डै तीन महिना लाग्यो । हिमाली क्षेत्रका नामहरुको साइजमा आउनलाई मलाई झण्डै तीन महिनानै लाग्यो । कहिलेकाही एउटै बसाईमा दुई चार वटा कविताहरु पनि लेखिएको छ ।
एकथरि मान्छे ढोका खुलेन भने ढकढक गरेर बस्छन र अर्काथरि खुलेन त खुलेन भनेर हिड्छन । म चाहिँ खुलेन त खुलेन भनेर हिड्ने खालको मान्छे भएँ । दुइ-चारवटा कविता कोर्ने प्रयाश गरे । पछिल्लो कालखण्डमा चाहिँ कविता लेख्न अलिकति ‘ग्याप’ आवश्यक छ कि भन्ने लाग्न थालेको छ । एउटै लाइनमा एउटै प्रकारका उही विषय वस्तुमा रुमलिएर बस्ने भन्दा अलिकति फरक होस।
अघि तीर्थले एकै पल्टमा ३, ४ वटा कविता लेखेको बतायौ । यस्तो पनि संभव हुँदो रहेछ ?
हुन्छ दाई, यो सम्भव हुन्छ । मैले लम्जुङ्को भुजुङ्गमा सातवटा गीत र दुईवटा कविता एउटै बसाईमा लेखें । एकनासले । एक चोटी धाराप्रवाहमा भावना आएपछि लगातार लेख्दै जाने क्रम अघि बढ्यो । त्यतिबेला लेखिएका गीतहरु रेकर्ड पनिभए । कति मन पराइए। ती गीत एउटै समयमा लेखिएका थिए । संस्मरण लेख्ने क्रममा कहिले कहीं तिथिमितिको खोजी राम्ररी भएन भने घटना तलमाथि हुनसक्छ । यस्तो थाह नभएका कुराको सोधीखोजी गर्नुपर्छ मानिसहरुसँग । कवितामा यस्तो आवश्यकता हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
कविताले यति विधि चर्चा पाएकोछ र पनि यसले खासै महत्व पाएको छैन । कविताको सिर्जनात्मक पक्षलाई तिखार्न सम्यक आलोचना हुनुपर्ने, कवितामाथि छलफल हुनुपर्ने, भाषा शुद्धिकरणमा जोड दिनुपर्ने र शैलिगत विविधता पहिल्याउनु पर्ने काम हुन सकेको छैनन ।किन होला यस्तो तीर्थ ?
साँच्चै नै कविताको उँचाइ बढाउने काम भएका छैनन । भन्दा नमिठो सुनिए पनि यथार्थ यही हो । नेपाली साहित्यमा समीक्षकहरुको साह्रै ठूलो अभाव छ । अझ नयाँ पुस्तामा त टिप्पणी गर्ने मान्छे नै छैनन जस्तो लाग्छ । कहिलेकाही कोही झलाक-झुलुक आउँछन् । एक चोटी लक्ष्मी गौतमका बा आए। अहिले महेश गौतमले अलि-अलि प्रयास गरेको देखिन्छ । एउटा समयमा अभि सुवेदी लाग्नुभयो । कवितालाई समीक्षाको विषयबस्तु बनाएर लेख्ने मान्छे हो उहाँ । त्यसपछि धेरै कम देखिन्छन। अहिले नेपाली साहित्यमा हेर्ने हो भने कृष्ण चन्द्र सिंह प्रधान पछि समालोचनाको क्षेत्रमा खडेरी लागेको छ । भूपि शेरचनको जति चर्चा भयो, उनका समकालीन, त्यति नै राम्रा कविहरुको चर्चा भएन त्यो काल खण्डमा । हरिभक्त कटुवालले कविता लेख्नुभयो । उहाँलाई कविताले भन्दा पनि रक्सीले बढी चर्चामा ल्यायो । उहाँको व्यक्तिगत चरित्र हावी भयो उहाँको कवि-व्यक्तित्वमा ।बाशु शशिलाई सम्झौं – उनले को सँग रक्सी पिए ? त्यसको चर्चा भयो । बाशु शशि कै सृजनाका विषयमा कति चर्चा भए त ? अब यो के प्रवृत्ति हो ? म ठ्याक्कै भन्न सक्दिन।
अहिले एक प्रकारले पव्लिकेशन्सहरुले आख्यानको प्रकाशनलाई महत्व दिएको अवस्था छ । कविता संग्रह त औपचारिकता पूरा गर्न मात्र प्रकाशित गरिन्छ । कविता केही हदमा शिथिल पनि भएको हो । कविता लेखनमा जुन उर्जा हुनुपर्ने थियो त्यो उर्जा नदेखिएको नै हो । पव्लिकेसनहरुले आफूले निकालेको पुस्तक र छापेका लेखकहरुलाई जुन महत्वका साथ प्रस्तुत गर्दछन त्यसलाई मिडियाले महत्व दिने चलन आएको छ । यसले पनि कवितामा प्रभाव पारेको हो । कविता वाचनमा चाहिँ प्रसस्त कार्यक्रमहरु भएका छन् । देख्दा-देख्दै नवराज पराजुली जस्ता नयाँ पुस्ताका कविले देश विदेशमा कविता बाचन गरेर हिडेको सुनिएको र देखिएको छ । कविताको युगै सिद्धियो भन्ने होइन। तर कविता सुन्ने र पढ्ने अभिरुचि कम भएकोछ । कविहरु पनि अहिले हेर्दै जानुभयो भने सकी नसकीआख्यानमा जान खोजे जस्तो, जानका लागि कोशिश गरेको जस्तो देखिन्छ । बजारले आख्यान खोज्यो भनेरै त होला ।
आख्यान पनि गतिलो त आएको छैन।
आख्यानको विज्ञापन जति गरेपनि, प्रकाशकले आख्यानलाई जति महिमा मण्डित गरे पनि…
गाह्रो कुरा चाहिं के लाग्छ भने साहित्य अन्य उत्पादनमा जस्तो मार्केटिङ्गले मात्र माग अनुसार पूर्ति गर्ने विषय होइन । बस्तुको उत्पादनका दुई कारण छन: उत्पादन भएर वजारमा लगिसकेपछि माग बढ्छ । अर्को हो डिमाण्ड छ भने प्रोडक्सन हुन्छ । साहित्य त्यो विषय होइन । बजारमा यस्तो माग छ, त्यही भएर हामी यस्तो लेख्छौं भन्ने हो भने साहित्यको जुन आदर्श हो, त्यसबाट विषयान्तर हुन्छ ।
राजनीतिमा जस्तै साहित्यमा पनि गुटगत स्वार्थले टाउको उठाइरहेको देखिन्छ ।
प्रशस्तै मात्रामा । साहित्यकारहरुमा सेलिव्रेटी बन्ने जुनमोह जागेको छ त्यसले पनि वर्वाद बनाएको छ । प्रकाशकहरुले आफ्ना लेखकहरुलाई सेलिव्रेटीको रुपमा स्थापित गर्न विभिन्न तिकडमको सहारा लिने गर्दछन । यो जुन प्रवृत्ति आएको छ, यसले बिषयलाई बरालेकोछ । मलाई गम्भीर साहित्य र सेलिव्रेटी एक ठाउँमा उभिन सक्ने विषयहो जस्तो लाग्दैन । एउटा राम्रो साधक सेलिव्रेटी बन्नु पर्दछ भन्नेमा विमति छैन। त्यसका लागि अनेकन तिगडम गर्नुपर्छ भन्नेमा पक्कै पनि विमति छ ।
यी गूटहरु चाहिँ पुरानै छन कि नयाँ बनेका छन् ? साहित्यमा राजनीतिको खोजी कति गरिन्छ ? मैले समाचारमा पढेको थिएँ, प्रगतिशील साहित्यकारहरुको गूट फुट्यो । लोकतान्त्रिक साहित्यकारहरुको गुट गैर लोकतान्त्रिकले अपहरण गरे । अहिले साहित्यकारहरुको गुट नै छैन। यो के हो ? तपाईंले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
अहिले तीन-चार प्रकारका गुट देखियो । राजनीतिले रेखाङ्कन गरेको गुट त पहिले देखि नै थियो । एक थरि प्रगतिशील लेखक संघमा जाने, अर्का थरी प्रजातान्त्रिक भन्दै नेपाली लेखक संघमा जाने गरेका थिए । प्रगतिशील लेखक संघमा जानेहरुमा राजनीतिको रंग एकदमै गाढा देखियो । डेमोक्र्याट्सहरुको समुह नेपाली लेखक संघमा लागे । त्यसमा कतिपय साँच्चैका डेमोक्र्याट्सहरु गोलबन्द भएका छन् । राजनीतिमा लागेर दुःख पाएका र साहित्यमा पनि त्यति कै दुःख गरेका धेरै मानिसहरु त्यतिकै छुटेका छन् । तपाईकै कुरा गरौं , तपाई त नेपाली लेखक संघमा हुनुहुन्न। हरि अधिकारी पनि हुनुहुन्न । अरु थुप्रो लेखकहरु छन् । म पनि थिएँ शुरुमा । संघमा मेरो आपत्ति भनेको केही साथीहरु यसलाई नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्थाको रुपमा अघि बढाउन चाहन्थे । लेखक संघ कसरी पार्टीको भ्रातृ संगठन बन्न सक्छ ? मेरो विमति यसैमा रह्यो । होला, मेरो बैचारिक सक्रियता कुनै पार्टीमा होला । तर मेरो लेखन त स्वतन्त्र हो नि ! मैले पनि वामपन्थीले जस्तै स्वतन्त्र लेखनमा विश्वास नगरेर निश्चित दर्शन र सिद्धान्तमा रहेर लेख्न थाले भने तिनीहरु र म मा अन्तर कहाँ रह्यो र ? जस्तो कम्युनिष्टहरुले लेनिनको लासलाई बचाएर राखे ।
चीनमा क्रान्ति गरिसकेपछि जताततै माओत्सेतुङ चाहिने भयो नि । कलमको टुप्पा देखि लिएर जताततै व्यक्तिपूजाको परम्परा आयो । त्यो र हामीले गरेको मूर्ति पूजामा के फरक छ ? हाम्रो हालत पनि त्यही हुन्छ । साहित्यमा लागेकाहरुले आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने, स्वतन्त्र लेखनको पक्षमा वकालत गर्ने तर लेखकहरुको संगठनलाई पार्टीको भ्रातृ संगठन बनाएर जाने हो भने स्वतन्त्रताको औकात कति रहन्छ ? यहीकारण हो, लेखक संघसँग मेरो त्यत्रो ठूलो मित्रता भएन । हुँदै भएन भन्न त नमिल्ला । केन्द्रिय उपाध्यक्ष सम्म भएको हूँ । त्यहाँ पनि पार्टीको भ्रातृ संगठन बनाउने नबनाउने विवाद उठ्यो । दोस्रो, देशको निश्चित भूगोलको हिसावले मानिसलाई हावीबनाउने प्रयास भयो । जस्तो, नेपाली लेखक संघलाई एकचोटी झापाली लेखक संघ पनि भनियो । झापा कै मात्र११ जना लेखक केन्द्रिय समितिमा थिए । जातिय आधारमा पनि गुटबन्दी भयो । पुस्ताको आधारमा गुट बन्यो । ४० को दशकमा उदाएकाले ५० को दशकमा उदाएकालाई नगन्ने प्रवृत्ति देखियो । जुन प्रवृत्ति के का निम्ति ? भन्दा सृजनाको आधारमा उभिएर भन्दा चर्चाको आधारमा स्थापित हुने विकृत मानसिकता भएका मानिसलाई गुट तर्फ हिडाएको छ । ५० वर्ष अघि मैले कविता लेखेको छु भने आखिर कविता त कवितै हुन्छ । अहिले नभएको कवितालाई कविता बनाउँदैमा अबको १० वर्षपछि त्यो कविता रहन्छ र ? सृजना माथि विश्वास भए गुटमाथि विश्वास गरिरहन जरुरी छैन ।
साहित्यलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने नारा र साहित्य सृजनाले जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ भन्ने नारा सँगसँगै हिडेजस्तो देखिन्छ । तपाईलाई कस्तो लाग्छ ?
कसैको व्यक्तिगत पीडा प्रकारान्तरले समाज कै पीडा हो । समाजबाट बाहेक भएर त्यो अनुभव आएको त होइन । कही कतै आन्दोलन भयो या राम्रो काम भयो भने तपाईं हर्षित बन्नु भयो । त्यो हर्ष समाज कै अंग भएकाले तपाईंमा आएको हो । जंगलमा बसेको भए त्यो हर्ष वा पीडाको अनुभव तपाईंलाई हुँदैन थियो होला । भनेपछि एउटा व्यक्तिको अनुभुति र व्यक्तिको चिन्तन समाजबाट पृथक हुनै सक्दैन….
तपाईंले किसानलाई देखेर आउने भाव र एउटा प्रगतिशिल लेखकले किसानलाई देखेर आउने भाव एउटै हैन र ?
एउटै हो ।
फेरी त्यसमा ट्याग किन लगाउनु पर्‍यो ? कविता त कवितै हो नि ?
मलाई कस्तो लाग्छ भने प्रगतिशील नबनेका, माक्र्सवाद माथि विश्वास राख्नेहरुको त्यहाँ पनि एउटा घेरा छ । जो प्रगतिशील लेखक संघको घेराभित्र कैद भएर बस्नु भएको छ उहाँहरु सृजनात्मक दृष्टिकोणले कति बलियो हुनुहुन्छ ? प्रगतिशील संघको घेराभन्दा बाहिर बसेका माक्र्सवाद माथि विश्वास राख्नेहरु बलिया पनि छन् नि । संस्थाहरुको अहिलेको अवस्था के देखियो भने गतिविधिहरुको आयोजना, सृजनात्मक वातावरणको निर्माण भन्दा पनि अमुकअमुक व्यक्तिहरुलाई कसरी उठाउन सकिन्छ, स्थापित गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान देखियो ।
प्रगतिशील जनकवि भनेपछि गोकुल जोशी । उनी साँच्चै राम्रा कवि हुन् त ? गोकुल जोशीलाई जनकविको रुपमा स्थापित गर्न यत्रो ठूलो प्रयत्न हुँदाहुँदै पनि किनआम मानिसहरुको बीचमा उनी जनकविका रुपमा स्थापित हुन सकेनन ? उभ्याएर मात्रै हुने भए त उनी उभिइ सक्थे नि ! साँच्चै भन्ने हो भने दुई तिहाइको सरकारबाट उनी स्थापित भइ सक्थे । उनको नाममा पुरस्कार स्थापना हुन्थ्यो होला । एकेडेमी बन्थ्यो होला । कवि शिरोमणि कै घोषणा हुन्थ्यो होला । तर सकिदो रहेनछ । जुन व्यक्तिलाई तपाईंले स्थापित गर्न खोज्नु भएको छ त्यो सँग गुणहरु रहेनछ भने तपाईंको प्रयासले मात्र स्थापित हुन सक्दो रहेनछ । गोकुल जोशीलाई हेरेर हामी यो सत्य संग साक्षात्कार गर्न पाउँछौ । त्यसका बाबजुद पनि मानिसहरु किन लागिरहेका छन् ! सृजना भन्दा बलियो लेखकको अरु कुनै सम्पत्ति हुँदैन । लेखक स्थापित हुने त उसको सृजनाले मात्र हो ।
अहिले त जो सत्ताको नजिक छ, जो निहित स्वार्थको नजिक छ त्यो ठूलो मान्छे भएको छ । एकेडेमिसियन भएको छ । चाहे कांग्रेसको पालामा होस, चाहे कम्युनिष्टको पालामा । तपाईंले माथि परिभाषित गरेजस्तो मान्छे प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नदेखेको कति भयो भन्नुहोस् त । तपाईं आफै पनि निराशाको विन्दुमा पुग्नु भयो र संगीत नाटक एकेडमीको सदस्य सचिवको पद छाडेर हिड्नु भयो ।
एउटै मान्छे १२ वर्षसम्म प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा विराजमान भयो ।उसलाई लेखक भनेर कति मानिसहरुले चिने त ?! प्रतिष्ठानको कुलपति हुन वा उपकुलपति हुन वा भनौं सदस्य–सचिव हुन श्रष्टा हुनु आबश्यक रहेन । श्रष्टा भएर त्यहाँ जाँदा जस्तो सम्मान हुनु पर्दछ , हिजो माधव घिमिरेको जस्तो सम्मान थियो अथवा हिजो लैनसिंह वाङ्देलको जस्तो सम्मान थियो अथवा बैरागी काइलालाई जुन सम्मान दिइएकोे थियो, आज त्यो अवस्था छैन । त्यसले प्रतिष्ठानलाई बलियो बनाउन योगदान पुगेको छ त ? यो त राज्यले एकेडेमीको भरपूर दुरुपयोग गरेको हो । यसलाई भर्ती केन्द्रको रुपमा अगाडि बढाइएको छ । भर्ती केन्द्रहरुबाट प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो समृद्ध नेपाल बनाउन त योगदान पुग्दैन ।
यो त एकप्रकारले प्रतिष्ठानहरुको पतनको प्रारम्भ पनि हो नि, हैन ? वास्तविक लेखक, वास्तविक सर्जक , वास्तविक कवि, वास्तविक समालोचक एकेडेमी बाहिर छन । एकेडेमीमा चाहीं ‘विथफुलफोर्स’ छ, भरिभराउ । यो पतन हैन र ?
यो एकेडेमी या संस्थाहरुको मात्रै पतन हैन । यो राज्यको पतन हो । सरकारको पतन हो ।
कहिले सम्म यसरी चलिरहन्छ ?
जबसम्म राजनीतिमा सबल मानिसहरुको उपस्थिति हुँदैन । मलाई के लाग्छ भने जब सम्म मान्छे आफैमा बलियो हुँदैन, तबसम्म केही हुँदैन । मानिस आफूप्रति विश्वस्त छ, आफ्नो उद्देश्य प्रति पूर्ण समर्पित छ, उसले आफ्नो निश्चित बाटो देखेको छ र मुलुकको समृद्धिका लागि गर्नुपर्ने कार्यको विषयमा उ संग निश्चित परिकल्पना छ भने त्यो मान्छेले सिस्टम बलियो बनाउछ । कमजोर मान्छे आफू बलियो हुनखोज्छ , बलियो मान्छेले सिस्टम बलियो बनाउन खोज्छ । अहिलेको अवस्था भनेको कमजोर मानिस सत्तामा हावीभएको अबस्था हो ।सत्ताको नेतृत्व उनीहरुले गरेका छन् । उनीहरुलाई आफ्नो कमजोरी थाहा छ । उनीहरु बलियो हुनका लागि कमजोर कडी जम्मा गरेर आफू बलियो हुन खोजी रहेका छन ।
तत्काल यसको समाधान देखिएको छैन ?
तत्कालत समाधान छैन । हालै देशमा तीन तहको चुनावभयो । पहिले स्थानीयतहको चुनाव भयो । मेरो वडामा ७० वर्षका बुढाहरु समेत चुनाव लड्न लालयित भए । मेरो क्षेत्रमा नगरका सभासदको उमेर ५० को सेरोफेरोमा छ । मैले कसरी विश्वास गर्ने अब युवाहरु राजनीतिमा आउन सक्छन् ? यो अवस्था देख्दा त मलाई यो देशमा हराएको वस्तु भनेको बैंस रहेछ भन्ने लाग्यो । जुनदेशमा बैंस हराउँछ नि, त्यो देशमा फुल फुल्छन् , घाम लाग्छ । तर त्यो देशका मानिसको ओठमा मुस्कान फुल्दैन ।
तपाईंको भनाईमा पुस्तान्तरण भएन। त्यहाँ पुग्न बुढै हुनुपर्‍यो ।
हो नि । हामीले अन्य देशमा देखेका छौं । नेताहरु ३०, ३५वर्षमा आउँछन राष्ट्रप्रमुखको रुपमा । हामीचाहिँ७० वर्षै पुग्नुपर्ने ? वृद्ध भत्ता खाएर मात्र देशको वागडोर सम्हाल्नु पर्ने ? म ६० लाग्न लागे । मेरो भनाई अब मेरा उमेरका मानिसहरुले राजनीति सरक्क छोड्दिनु पर्दछ । नेतृत्व नयाँ पंक्तिमा दिनु पर्दछ । हामी आफू पनि गर्न सकिरहेका छैनौं …
तपाईं जस्तै अपरिग्रहीचाहिँ को होलान त ?
अपरिग्रहीको कुनामा म धकेलिएको हुँ । देशका लागि मैले देखेका सपनाहरु कार्यन्वयन गर्न सक्छु कि भन्ने चाहिं लाग्थ्यो । तर वातावरण नै त्यस्तो हुन सकेन । म नेताहरु सम्म पनि पुगेको थिएँ । उनीहरुले मलाई देखे देखेनन् अर्को कुरा भयो । उनीहरुले देखेका भए टिपोट गर्थे होलान् । पुग्नु एउटा कुरा हो । उनीहरुको दृष्टिमा पर्नु अर्को कुरा । उनीहरुलाई आवश्यक परेको बेलामाउपलव्ध भइयो । उनीहरुको दृष्टिमा म उपलव्ध पात्र भइन ।
त्यो तपाईंको सोचाई मात्रपो हो कि ? अलिक पछि उपयोगको पात्र बन्नु हुन्थ्यो कि ? किनभने राजनीति त जहिले पनि संभावनाको खेल हो नि ?
संभावनाको खेल त हो । तर तपाईंसँग जतिवेला उर्जा हुन्छ सम्भावनाको खेल त्यतिबेला खेल्न मजा आउँछ । करेन्ट आएको बेलामा स्विचथिच्यो भने बल्ब बल्छ । लो भोल्टेज भएको बेलामा स्विच थिच्न थाल्यो भने बत्ती बल्दैन । सुशिल कोइरालाको त्यही भयो नि त ।
त्यो उहाँको व्यक्तिगत दुर्भाग्य हो । सुशिल कोइरालाको नाममा मुलुकले भोगेको दुर्भाग्य हो ।गोरु पनि सधै जोतिन्न नि !मानिसमा उर्जा भएको समयमा अवसर काम लाग्ने हो ।
तपाईंले अध्यात्म पनि इन्कार गर्नुभएको छ । म पूरै अध्यात्मिक होइन, मात्र विन्ध्यवासिनीको मन्दिरलाई व्यवस्थापन गर्न लागेको भन्नुहुन्छ । साहित्यमा कन्सन्ट्रेसन भइरहेको छ कि छैन तपाईंको ?
जति हुनुपर्ने त्यति छैन । लेख्ने हुटहुटी छ । अहिले केही छोटा कविताहरु लेखिरहेको छु । अब मन्त्र नै त नभनौं तर, झट्ट सुन्दा तपाईंलाई सम्झन पनि समय नलाग्ने कुनै एउटा पंक्ति भएपनि मनमा बस्न सक्ने कविता लेख्ने मेरोे प्रयास छ । अहिले पनि त्यही प्रयासमा छु ।
अलिक लामो कविताको योजना बनाइरहनु भएको हो?
त्यो चाहिं होइन । एक दुई चोटि लामो कविता लेख्ने प्रयास चाहिँ गरे । तर भय चाहिँ के छ भने कवितालाई तन्काउँदा त्यो खुकुलो हुन्छ । जस्तो कुनैगाउँमा बुढी आमाले आँगनमा बसेर गुन्द्रीबुन्दै गरेको बेलामा एउटा दृश्य देखिन्छ । बुढी आमाले त्यो गुन्द्रि बुन्नका निम्ति राखिने लठ्ठालाई ढ्याक ढ्याक हानेर कम्प्याक्ट नबनाए सम्म गुन्द्री बलियो र मजबुत हुँदैन । त्यसमा बुढी आमाको बल पुगेन भने गुन्द्री फ्याङ्लो हुन्छ । मलाई लाग्छ कविता पनि त्यही हो । कवितालाई हामी कति मजबुत ढंगले लेख्छौं, कति कम्प्याक्ट बनाउँछौं त्यसको अर्थ हुन्छ । कवितामा कम्प्याक्टनेस चाहिन्छ । यो मेरो कमजोरी पनि हुन सक्छ कि कवितालाई लामो र श्रृङ्खला वद्ध ढंगले प्रस्तुत गर्ने हिचकिचाउँछु । मजबूत लेख्ने सामथ्र्य नभएकोले पनि होला । कविता लामो हुने कि छोटो हुने भन्ने वहस आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कविता अन्ततः कविता नै हो ।
लामो कविताभन्दा एउटै कथालाई खण्डकाव्यको रुपमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले मुना–मदन लेखेजस्तै त्यस्तै गद्य विधामा खण्डकाव्य बन्छ कि बन्दैन ?
बन्न सक्दैन भन्ने हैन बन्छ । त्यसमा मैले चाहिँ प्रयत्न गरेको छैन । प्रयत्न गरेपनि हुन सक्छ कि सक्दैन ? त्यो बेलामा थाहा होला । मेरो चाहिँ छोटोमा आफूलाई अभिव्यक्त गर्ने बानी नै भयो ।
गद्यलेखनमाकतिको रुचि छ तपाईंको ?
रुचि हुँदै नभएको हैन । केही हदसम्म छ । मलाई व्यक्तिमाथि लेख्न मन पर्छ । मैले केही लेखेको पनि छु । पोखराका धेरै मानिसहरु माथि लेखेको छु मैले । अर्को मलाई संस्मरण लेख्न मन पर्छ ।
केही योजना छ त्यसमा?
अहिले अम्बर गुरुङमाथि संस्मरण लेखिरहेको छु । अम्बर स्मृति भनेर लेखिरहेको छु । मैले लेखिरहने भन्दा लामै हुन्छ होला त्यो ।
संस्मरणहरुको संकलन निकल्ने संभावना छ ?
अलिक समय लाग्छ ।
तीर्थ श्रेष्ठ असन्तुष्टिको भुँग्रोमाथि बसेको छ भन्दा के हुन्छ ?
होइन । म अध्यारोको बीचमा उज्यालोको खोजिमा बसेको….
निसासिएको वा कहालिएको भन्नपनि सकिन्छ ?
त्यति निराश भइसक्ने अवस्थामा पुगेको छैन । तर मुलुकमा वेथितिको अवस्था यहीगतिमा बढ्दै जाने हो भने म मात्रै हैन धेरै मानिसहरु निसासिनेछन् । लगभग-लगभग ३ करोड जनसंख्यामा १ करोड विदेशमा छन् । झण्डै ४०, ५० लाख राजनीतिक कार्यकर्ता छन् सबै पार्टीका जोड्ने हो भने । बुढाबुढी र बालबच्चाको हिसाव गर्नुभयो भने अरु ५० लाख होलान् । यो मुलुकमाकृयाशिल जनशक्ति अत्यन्त थोरै छ । त्यसमा पनि साँच्चै मुलुकका निम्ति केही गर्छु भन्नेलाई हेर्ने हो भने अझ न्युन छ । यो डर लाग्दो स्थिति होइन ? मेरो कुरा सबभन्दा पहिले यी वेथितिहरुलाई उजागर गर्नुपर्छ र उजागर गरिसकेपछि थिति बसाउन सकिन्छ । कमजोरी नै थाहा पाइएन भने त बलियो कसरी हुने !
पुस्तान्तरण भएको छैन । हामी यसमा कल्पना गरिरहेका छौं आगामी संघर्षमा तुफान ल्याउन तीर्थ श्रेष्ठको योगदानकति हुन्छ ?
मेरो उमेर र गतिलाई हेर्दा मैले गर्ने प्रयत्न र त्यसले पार्ने प्रभाव धेरै ठूलो छ जस्तो मलाई लाग्दैन । सानोतिनो आयतनमा अहिले पनि म जनता संगै जोडिएर काम गरिरहेको छु । ऊर्जा अझै पनि पर्याप्त बाँकी छ ।